Kedu ihe bụ acha anụnụ anụnụ? Anyị na-agwa gị ihe niile | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ikekwe ị nụtụla banyere ịdị adị nke acha anụnụ anụnụ. Na acha anụnụ anụnụ okpomọkụ radiators ma na-abawanye arụmọrụ nke kpo oku na ha. Ma, ruo ókè ha a knowaa ka ị maara ụdị okpomọkụ a ma ị maara ma ọ bụrụ na ọ dị irè? Ikekwe ọ bụ atụmatụ ịzụ ahịa ọzọ nke ụlọ ọrụ ndị na-eji mkpa anyị egwu egwu iji mee ka anyị zụta ngwaahịa ọhụrụ, ndị ọzọ "ọhụụ".
N'isiokwu a, anyị ga-abanye n'ime ihe na-acha anụnụ anụnụ, otu o si arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma karịa ndị ọzọ. You chọrọ ịmụtakwu banyere ya?
2 Heating uru
3 Uzo ojoo nke iji ya
4 Oriri igwe na-acha anụnụ anụnụ
5 Ọ bara uru itinye ha n'ụlọ?
Okpomọkụ ma ọ bụ ike na-acha anụnụ anụnụ bụ okwu nke edochabeghị anya. Ọtụtụ mmadụ na-ajụ maka ya n'ihi na a na-enwe obi abụọ karịa. Okwu a sitere na igwe ntanetị ọhụụ. Ha bụ mgbanwe nke igwe ọkụ ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ kemgbe ha na-ejikwa ihe mgbochi iji kpoo ọkụ. Kpọmkwem, ha na-eji okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ, ebe ọ bụ na ha na-eji ihe dị a okpomọkụ nyefe ọmụmụ na-akpọ "Blue Sun".
Nke ahụ bụ ebe aha ahụ si abịa sitere na ọkụ ahụ na radiators ọhụrụ. Iji ghọta ihe okpomọkụ a na-acha anụnụ anụnụ na-adabere, ị ga-aga 1841 ebe James Prescott chọpụtara mmetụta Joule. Mmetụta a bụ ihe na-enyere aka ịchọpụta ma ọkụ eletrik gafere onye nduzi. A maara ya n'ihi na akụkụ nke ike nke ike nke elektrọn nke ọkụ eletrik, mgbe ọ na-agafe na mmiri ahụ, agbanwee ghọọ okpomọkụ. Nke a bụ ụkpụrụ nke igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ.
Site na ọkụ eletrik nke na-agafere mmiri ọkụ na-ebufe ọkụ, ọ nwere ike ikpo ọkụ iji nye mmụba nke okpomọkụ n'ime ụlọ ebe ọ dị.
Iji mụtakwuo banyere ụdị okpomọkụ a, anyị ga-enyocha ma uru na ọghọm mgbe ị na-eji ya.
Isi uru ọ nwere bụ na nwere ike iji nyocha iji nyochaa okpomọkụ. N'ụzọ dị otú a, ha na-abụkarị nke ziri ezi ma na-egbochi ike ịla n'iyi. Na ihu nke ịchekwa ụgwọ ọkụ eletrik, nke a bụ akụkụ dị mma iji tụlee.
Ke ofụri ofụri, ha yiri ndị nkịtị radiators. Agbanyeghị, ha dị iche na nke ahụ, n'otu aka, mmiri mmiri nke dochie mmanụ nke ndụ niile na - agagharị n'ime na, na nke ọzọ, na ha nwere oge. Ọzọ ọ bụ ihe ọzọ iji leba anya na nchekwa. Anyị nwere ike ịhazi ya ka ọ nweta ya ogologo oge anyị chọrọ na-egbughị ike ma ọ bụ ego. Onye mmemme na-ahazi ọnọdụ okpomọkụ.
Ikuku nke ngwa ahụ na-achụ n’elu si ekesasị n’ime ụlọ ahụ. Wayzọ a ị ga-esi kpoo ya nke ọma na ngwa ngwa.
Ha anaghị emepụta gas, isi ma ọ bụ resid.
Echichi nrụpụta dị obere karịa nke igwe nfuli. Ha nwere usoro di mfe maka idozi na mgbidi.
Akụkụ ọzọ nke pụtara ìhè, na-adịchaghị mkpa, bụ na imewe ahụ mara mma karịa ndị nke ochie. Akụkụ a dị mma niile, mana ọ ka mma itinye ya na akaụntụ ma ọ bụrụ na ọ na-enye aka na imepụta ụlọ gị.
Uzo ojoo nke iji ya
Dị nnọọ ka igwe okpomọkụ si acha anụnụ anụnụ nwere uru, ha nwekwara ọghọm mgbe ị na-eji ha.
N'oge ụfọdụ, nwere ike ịnwekwu ọkụ eletrik, ya mere ha nwere ike ịdị obere ma dị ọnụ karịa usoro kpo oku.
Enwere ike ịsị na iji ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-adọrọ mmasị karị n'ụlọ ndị dị na ebe nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ nakwa na ọ dịghị mkpa ka a na-eji ya eme ihe mgbe niile. N'ozuzu, a na-eji ya maka ọnọdụ ndị ahụ ebe ọ na-ekwesịghị iji ya ogologo oge. Yabụ, na anyị kwesịrị ịhazi ya, kpoo ụlọ ahụ ngwa ngwa ma nweta nkasi obi na-enweghị nnukwu mmefu ike.
Oriri igwe na-acha anụnụ anụnụ
Iji mee ka e zoo aka n'iri ihe oriri ma e jiri ya tụnyere radiators, ị ga-ahụ arụmọrụ ha. Arụ ọrụ nke ngwa oru bụ mmekọrịta dị n’etiti ọkụ sitere na radiator na ike ọ na - ewe. Ya mere, arụmọrụ nke ndị a radiators ọ bụ 100%, tụnyere 360% nke okpomọkụ nfuli. Nke a na-eme ka anyị hụ na mmepụta ume dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na sistemụ ịchọrọ iji mepụta ọkụ site na ọkụ eletrik, n'ihi na ụlọ anaghị enwe oghere gas, n'ihi na enweghị ohere ịwụnye tank mmanụ dizel, wdg. You kwesịrị ịtụle nhọrọ nke ịwụnye igwe ọkụ ọkụ ma ọ bụ igwe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ.
Ọ bara uru itinye ha n'ụlọ?
Mgbe ị gụchara ihe niile gbasara ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, site na ihe ọ bụ iji rie, ị nwere ajụjụ ma ọ bara uru ịwụnye ya n'ụlọ gị ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ nnukwu ego. Ọfọn, ka anyị gaa n'akụkụ. Nke mbụ, ị ga-ama usoro atụmatụ ahịa ọ bụla na-acha anụnụ anụnụ nwere ndabere. Ikekwe, ọ bụrụ na azụmahịa abịa n’ụlọ anyị na-ere radiators, anyị ga-atụfu ya n’oge na-adịghị anya.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha amalite ịgwa anyị banyere okpomọkụ a na-acha anụnụ anụnụ, anyị ga-enwe mmasị ma ọ dịkarịa ala. Have ga-anakwere na ihe a na-acha anụnụ anụnụ na-ada ezigbo mma ma yie ka ọ na-ekwu maka mgbanwe teknụzụ dum. Nke a adịghị ka nke a. Ọ bụ naanị radiator na, kama iji mmanụ, na-eji ụdị mmiri ọzọ. Ozugbo ọkụ eletrik gafere ya, ọ na-ekpo ọkụ na ikuku na-agbasa n'ime ụlọ ahụ.
Kedu mgbe igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ dị mma maka anyị na mgbe ọ bụghị? Ọ dị nnọọ mfe. N'ebe ndị ahụ n'ihi ihu igwe ma ọ bụ omume obibi nke ụlọ ahụ, ọ dịghị mkpa ka a nọrọ ya ogologo oge ma ọ bụ kpoo ọtụtụ ime ụlọ. Havekwesiri iji ndị radiators mee ihe maka ojiji a kapịrị ọnụ ma jiri ọsọ ha ga-eji mee ka ụlọ kpụ ọkụ n'ọnụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ kpo oku ruo ogologo oge, gbalịa sistemụ ọkụ ndị ọzọ dịka nfuli ọkụ ma ọ bụ a wifi thermostat.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị mụtara banyere ndị radiators ndị a nakwa na ị gaghị aghọgbu gị site na atụmatụ ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » Kedu ihe bụ acha anụnụ anụnụ?